Mutumbi waAmai Francis Unoonekwa neVanhu muHarare
Mazana nemazana evanhu aungana muHarare neChina pamunamato wekuonekana nemutumbi waAmai Lynde Francis, avo vakashaya neChipiri kuAvenues Clinic muHarare.
Amai Francis vaizivikanwa zvikuru munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu vanorarama nehutachiwana hweHIV/AIDS. Vakatanga kuziva kuti vairarama neHIV muna 1986, mushure mekunge vaongororwa ropa ravo.
Kubva ipapo, Amai Francis vakabva vazvipira kushanda zvakasimba mukuzivisa nyika nezvechirwere chinokonzerwa nehutachiwona hweHIV. Vakavawo mumwe wenahu vashoma vekutanga kubuda pachena kuti vairarama nehutachiwana hweHIV.
Nekupindana kwenguva, Amai Francis vakazoumba sangano re The Centre, iro rinobatsira vanhu vari kurarama neHIV/AIDS. Nhengo dzesangano iri ndidzo dzakava pakati pevanhu vekutanga kuwana mapiritsi ema ARVs pachena.
Vamwe vanhu vakashanda naAmai Francis mukurwira kodzero dzevanhu vanosanganisira muchakabvu Auxilia Chimusoro, muchakabvu Elliot "Madzibada" Magunje, Doctor Frenk Guni, avo vava kushandira vari kuAmerica, VaChitiga Mbanje nevamwe vakawanda vapenyu pamwe nevakashaya.
Amai Francis vanonzi vacharadzikwa kwaMutare mushure mekunge mutumbi wavo wapiswa, vovigwa riri dota semarongero avakazviita vachiri vapenyu. Amai Francis vanozivikanwa zvikuru munyaya dzekutsigira nzira yekuviga vanhu vave dota, mushure mekunge mutumbi wapiswa. Amai Francis vaiiti nzira iyi haishandise mari yakawanda, kana zvichienzaniswa nemari dzinoshandiswa pakutenga bhokisi rekuviga mufi nezvimwe zvinodiwa.
Amai Francis vakasiyana kare nemurume wavo, Alwyn Francis, uye vasiya vana nevazukuru.